बिहान व्यायाम - तपाईं उठ पछि यो सरल आन्दोलन, चाँडै अनुगमन गर्न। यो नियम पालन दुवै जवान र वृद्ध मान्छे को लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। र अन्तिम श्रेणी किनभने रूपमा जीवन पेंशन र comorbidities न्यूनतम गर्न लोकोमोटर गतिविधि कम, नियमित पनि अधिक व्यायाम आवश्यक छ। तपाईं अब एउटा विश्राम दिन वा दुई र बेचैनी घट्दैछ भन्ठान्छन् छैन। यो कम्तिमा पनि एक दिन ओछ्यानमा झूठ गर्नुपर्छ र अर्को बिहान वृद्धि पनि कठिन हुनेछ। वृद्ध लागि चार्ज - यो मांसपेशी र संयुक्त दुखाइ बिना लामो र सुखी जीवन को बाटो छ।
वास्तवमा, पुरातन रोम चिकित्सकहरु मा व्यायाम को लाभ बढी सजग। तर त्यसपछि यो झूट वा बसिरहेका हुनेछ थियो धेरै रूपमा औसत retiree हाल अनुमति दिन्छ एक जीवित मानिस, कल्पना गर्न गाह्रो थियो। वृद्ध लागि चार्ज - धेरै पर्याप्त छ नगर्ने गतिविधि र ताकत, गर्न प्रमुख छ।
अक्सर, नियमित व्यायाम प्रदर्शन गर्ने मान्छे, 40-50 वर्ष पछि यो पेशा फेंक। र व्यर्थमा। मानिस आफूलाई प्राकृतिक लोड इनकार र आन्दोलनहरु को एक परिणाम भद्दा बन्न रूपमा ताकत र सजीवता गायब। र मुख्य कारण - यो व्यायाम को बस कमी छ। केही समयको लागि गतिहीन खडा कुनै पनि संयन्त्र सोच्नुहोस्। यो काम गर्न उहाँलाई फिर्ता प्राप्त गर्न सजिलो छ? एक मान्छे - एक थप जटिल प्रणाली।
व्यायाम को भूमिका
वृद्ध लागि चार्ज कहिलेकाहीं पनि आधुनिक औषधी संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् शक्तिशाली revitalizing प्रभाव छ। यो व्यायाम को अवकाश जीवन वृद्धि लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ छ। प्रणालीबद्ध एक विशेष प्रविधी द्वारा बाहिर प्रदर्शन, यो आन्तरिक अङ्गहरू र प्रणाली मा लाभकारी प्रभाव, साथै काम गर्न सक्ने क्षमता सुधार भएको छ।
आरोप वृद्ध लागि आधारित छ जो मा सामान्य सिद्धान्त
सबै को पहिले जिल्ला चिकित्सक संग परामर्श गर्न आवश्यक छ। उहाँले नियमित आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति देख्दा, यो तपाईं एक दैनिक व्यायाम दिनचर्या सुरु गर्नु अघि व्यायाम कस्तो तपाईं थप सल्लाह आवश्यक विशेषज्ञहरु को कुनै पनि साथ सिफारिस गरिएको छैन बताउन सक्छ।
चार्ज वृद्ध लागि - यो मेहनत र सजाय र सजिलो र रमाइलो प्रक्रिया हो। लोड धेरै सानो देखि सुरु गर्नुपर्छ र बिस्तारै अभ्यास मा गर्न रोगी को इच्छा साथ सँगै बढ्न। तिनीहरूलाई विरुद्ध कुनै हिंसा, रूपमा तपाईं धेरै छैन गर्नुपर्छ। एक व्यायाम को कार्यान्वयन समयमा भने, तपाईं पीडा महसुस हुनेछ - यसलाई बन्द गर्न एक संकेत हो।
सबै अभ्यास शान्त, मापन मोडमा गर्नुपर्छ। चार्ज वृद्ध लागि - यसलाई यहाँ तपाईं एक स्पार्टन प्रशिक्षण छैन कुनै पनि रेकर्ड आवश्यक छैन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण र सही ताल साँस छ। कोठा उपयोगी केही मिनेट कक्षाहरू कोठा वरिपरि हिंड्न राम्रो अघि, राम्रो ventilated गर्नुपर्छ।
संयुक्त कठोरता र osteoporosis को रोकथाम
यो सजिलै वृद्ध लागि बिहान व्यायाम solves जो अवकाश उमेर, मा नम्बर एक समस्या छ। को अभ्यास गर्न यो बिस्तारै लोड वृद्धि, हरेक दिन आवश्यक छ। यो एक सेट सुरु घाँटी लागि अभ्यास। यो अक्सर टाउको दुखाइ यस विशेष मेरुदण्ड को समस्या को परिणाम हो, हाम्रो कंकाल सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भाग हो।
प्रयोगले सुरु गर्न, तपाईं अझै पनि ओछ्यानमा झूट गर्न सक्नुहुन्छ। घाँटी को यो धेरै पटक flexion र विस्तार फिर्ता र निस्कने गर्न। आन्दोलनहरु अत्यन्तै सहज थिए राख्न प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि अन्य एक काँध बाट घाँटी को झुकाव पालना गर्नुहोस्। तपाईंले तीन दस प्रत्येक पक्षमा पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या बनाउन सक्छ। दायाँ र बायाँ गर्न जटिल twists र घाँटी को पालैपालो बाहिर गोलाई।
पुराना महिलाहरु को लागि चार्ज हात आन्दोलन समावेश गर्न पक्का हुनुपर्छ। फुलेको नसाहरु, रगत stasis, घनास्त्रता - यो सबै अवकाश उमेर मा एक दुर्लभ घटना छैन। निस्सन्देह, दबाइ रद्द गरिएको छ, तर लागूऔषधको सेवन चिकित्सकीय अभ्यास धेरै राम्रो काम।
अब तपाईं तल बस्न र प्रदर्शन गर्न सक्छन् हात अभ्यास। पहिलो मोड्नु र unbend phalanges। ठीक तिनीहरूलाई लागि काम पछि, तपाईं सारा हात झुकन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक परिपत्र गति कलाई पछि छ। पहिलो घडीको दिशामा, त्यसपछि घडीको। परिसर को अन्तिम व्यायाम - को कोहनी मा एक दोब्र्याइएको। हात गर्दा पक्ष सीधा छन्। बिहान व्यायाम वृद्ध लागि रमाइलो सोख यसलाई विशेष गरी यदि रुचि दुवै spouses हुन सक्छ।
को खुट्टा र मुर्कुट्टा लागि अभ्यास
अझै पनि ओछ्यानमा बसिरहेका, वैकल्पिक clenching र unclamping औंलाहरुमा गर्छन्। व्यायाम जो तपाईं समस्या पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या बनाउने छैन हुनेछ भन्ने हो, धेरै सरल छ। कि पछि, विभिन्न निर्देशनहरू मा खुट्टा रोल। प्रत्येक दिशा मा 10-15 पटक, तर यो सम्भव र बढि छ।
तपाईं थकित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले खडा गर्न सक्नुहुन्छ र सानो कोठा वरिपरि हिंड्न, र त्यसपछि जारी। त्यसपछि तपाईं खींच र तिनीहरूलाई खींच रोकिनेछ। बसिरहेका गर्दा व्यायाम प्रदर्शन। अब तपाईं गोडा र प्रकाश उठबस मा खुट्टा झुकन पर्खिरहेका छन्।
अभ्यास मांसपेशिहरु बलियो बनाउन
हृदय मा लोड पूर्ण contraindicated छ भने पनि, तपाईं कुनै पनि रोग मा बिगार्न जो छैन isometric व्यायाम, एक श्रृंखला टिप्न गर्न सक्नुहुन्छ। तल लाइन मान्छे यस अवस्थामा केहि सेकेन्ड मा भण्डारण गर्दछ, प्रतिरोध विजयी, केही मांसपेशी कम र छ। प्रत्येक मांसपेशी समूहको लागि यसको आफ्नै सेट संग आउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, त्यहाँ एक चिरपरिचित व्यायाम हातमा र औंलाहरु को सानो मांसपेशीमा लागि धेरै सरल र प्रभावकारी छ। तपाईं बस सही गर्न आफ्नो बायाँ हात को औंलाहरु संलग्न र तिनीहरूलाई समान रूप धक्का गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ काँध girdle को मांसपेशिहरु लागि कसरत को कुनै कम परिचित संस्करण हो। आफ्नो हात, यो नखोली, लक मा clasp र अलग हातमा पुल। Isometric व्यायाम, को स्पष्ट सादगी र सजिलो भए तापनि उपस्थित चिकित्सक द्वारा व्यक्तिगत चयन गर्नुपर्छ।
श्वास अभ्यास को बिहान सेट समाप्त गर्न निश्चित हुनुहोस्। हामी निरन्तर साधारणतया फोक्सोमा मात्र माथिल्लो भाग vented सास फेर्न भन्ने तथ्यलाई बावजुद। तिनीहरूलाई र क्षेत्र बाँकी सक्षम गर्न, यो एक दैनिक आधार मा एक सरल व्यायाम गर्न आवश्यक छ। एक बसिरहेका स्थिति बिस्तारै हातमा हात भंग देखि, केहि सेकेन्ड को लागि आफ्नो सास पकड र गहिरो सास लिनुहोस्। यस समयमा हात छाती नेतृत्व।
अब, एक गहिरो सास लिन आफ्नो हात दोस्रो लागि आफ्नो सास माथि राख्नु र पकड। त्यसपछि आफ्नो हथियार छाती मा जोडेको clutching, बाहिर गहिरो लिन र पेट गर्न घुँडा मा बाङ्गो भएको खुट्टा माथि तान्नु।
फुलेको नसाहरु को रोकथाम र घनास्त्रता
यो फुलेको नसाहरु को समस्या निष्पक्ष सेक्स सबैभन्दा जरुरी छ किनभने पुरानो महिलाहरु को लागि बिहान व्यायाम, यी अभ्यास समावेश गर्न पक्का हुनुपर्छ। यो रोग रोकथाम र सुधार को लागि अभ्यास एकदम सरल, तर तैपनि प्रभावकारी हुन्छ।
आफ्नो पछाडि झूट, तपाईंको खुट्टा उचाली र साइकल को pedals घुमाउन। प्रयोगले केही मिनेट आराम र पालना गर्दा खुट्टा को आन्दोलन कैंची एक जोडी जस्तो। यस्तो अभ्यास को दैनिक प्रदर्शन निकै आफ्नो जीवन को गुणस्तर सुधार हुनेछ।
Hula-रिंग: कति क्यालोरी रिंग घुमाई गर्दा जलाए छन्
क्लब Timiryazev मा "शान": विवरण, सेवा र समीक्षा
प्राकृतिक चयन के हो? प्राकृतिक चयन को प्रकार (तालिका)
आर्थिक तत्व मा लागत को वर्गीकरण
गैर-जीवित स्वभाव के हो?
एक समाधान 'chlorhexidine': mouthwash र अन्य आवेदन